Bit By Bit - Ịjụ ajụjụ - 3.3 Mkpokọta nnyocha e mere njehie kpuchie
Total nnyocha e mere njehie = onodi njehie + mmesho njehie.
Atụmatụ ndị na-esite n'ọmụmụ nyocha na-abụkarị ndị na-ezughị okè. Nke ahụ bụ, enwere ihe dị iche n'etiti atụmatụ e mere site na nnyocha nyocha (dịka, ọnụ ọgụgụ dị elu nke ụmụ akwụkwọ na ụlọ akwụkwọ) na ezigbo uru dị na ọnụ ọgụgụ (dịka, ogo dị elu nke ụmụ akwụkwọ na ụlọ akwụkwọ). Mgbe ụfọdụ, njehie ndị a dị ntakịrị na ha abaghị uru, mana mgbe ụfọdụ, ọ dị mwute ikwu na ha nwere ike ibu nnukwu na uru. N'ịgbalị ịghọta, tụọ, ma belata njehie, ndị na-eme nchọpụta ji nwayọọ nwayọọ mepụta otu ihe na-emepụta ihe dị iche iche maka njehie ndị nwere ike ibilite na nnyocha nyocha: nchịkọta usoro nyocha ọhụụ (Groves and Lyberg 2010) . Ọ bụ ezie na mmepe nke usoro a malitere na 1940, Echere m na ọ na-enye anyị ihe abụọ bara uru maka nnyocha nyocha na afọ dijitalụ.
First, ngụkọta nnyocha e mere na njehie kpuchie anam ẹfiọk na e nwere ihe abụọ na ụdị nke njehie: echiche ọjọọ na ndịiche. N'ụzọ dị nkpa, njehie bụ njehie usoro na mgbanwe dị na njehie. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, jiri anya nyochaa 1,000 nyocha nke otu nnyocha nyocha ahụ wee chọpụta nhazi nke atụmatụ site na nchịkọta 1,000 a. Ntughari di iche n'agbata ihe ndia bu ihe aturu na ezi uru. Mgbanwe ahụ bụ mgbanwe nke atụmatụ ndị a. Ihe ọ bụla ọzọ hà, anyị ga-achọ usoro na-enweghị isi na obere obere mgbanwe. O di nwute, maka ọtụtụ nsogbu dị iche iche, ụdị enweghị isi, usoro dị iche iche na-adịghị adị, nke na-eme ka ndị nchọpụta nọ n'ọnọdụ siri ike nke ikpebi otu esi edozi nsogbu ndị ahụ na-akpata enweghị isi. Ụfọdụ ndị na-eme nchọpụta na-ahọrọ ihe ndị na-enweghị mmasị, ma otu onye na-elekwasị anya na enweghị ike imehie. Ọ bụrụ na ihe mgbaru ọsọ bụ ịmepụta atụmatụ nke dị ka o kwere omume n'eziokwu (ya bụ, na obere njehie), mgbe ahụ ọ ga - aka mma ka ị nwee usoro nke nwere ntakịrị mkparị na obere nghọtahie karịa nke na - enweghị mmasị ma nwee nnukwu mgbanwe (nọmba nke 3.1). N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, usoro nyochaa nyocha niile gosiri na mgbe ị na-atụle nyocha nyocha, ị ga-atụle ma esemokwu na mgbanwe.
Figure 3.1: Ntụle na mgbanwe. O doro anya, ndị nchọpụta ga-enwe ihe na-enweghị isi, usoro njedebe dị ala. Nke bụ eziokwu bụ na ha na-emekarị mkpebi nke ga-eme ka azụmahịa dị n'etiti esemokwu na esemokwu. Ọ bụ ezie na ụfọdụ ndị na-eme nchọpụta na-ahọrọ n'ụzọ na-enweghị mmasị, usoro ụfọdụ, obere oge, obere usoro nwere ike imepụta atụmatụ ziri ezi karịa usoro a na-achọghị iche iche nke nwere nnukwu nghọtahie.
Nke abụọ isi nghọta si ngụkọta nnyocha e mere na njehie kpuchie, nke ga na-ahazi ihe nke isiokwu a, bụ na e nwere abụọ na isi mmalite nke njehie: nsogbu metụtara onye ị na-agwa (yiri) na nsogbu metụtara ihe unu na-amụta site ndị mkparịta ụka (n'ihe ). Dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike ịchọrọ ịmepụta echiche banyere ntanetịime weebụ maka ndị okenye bi na France. Ime atụmatụ a chọrọ ụdị abụọ dị iche iche. Nke mbụ, site na azịza nke ndị na-aza ajụjụ, ị ghaghị ịme ka àgwà ha dị iche iche banyere nzuzo nzuzo (nke bụ nsogbu nke mmụba). Nke abụọ, site na àgwà ndị na-adịghị mma n'etiti ndị nabatara, ị ghaghị ịkọwa àgwà ndị mmadụ n'ozuzu ya (nke bụ nsogbu nke nnọchiteanya). Ntụle zuru okè na ajụjụ nyocha ndị siri ike ga-eweta atụmatụ ọjọọ, dị ka a ga-atụle ihe ọjọọ na ajụjụ nyocha zuru oke. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, atụmatụ dị mma chọrọ ụzọ dị mma iji nyocha na ihe nnọchiteanya. N'inye nzụlite ahụ, m ga-enyocha otú ndị nchọpụta nyocha si eche echiche banyere nnọchiteanya na mmụba n'oge gara aga. Mgbe ahụ, m ga-egosi otú echiche gbasara ihe nnọchite anya na nha nwere ike isi duzie nchọpụta nyocha afọ ole na ole.